PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-20 - Uqale ibhizinisi eneminyaka eyi-12
Uqale ibhizinisi eneminyaka eyi-12
Ilanga langeSonto - 2017-08-20 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
USEYINJINGA nosomabhizinisi ohlonishwayo kuleli owayehlala ephoyinti epatanisa impilo ethekwini, futhi ephuma emndenini ohlwempu .
Uma ukhuluma uphatha igama likamnu Calvin Mathibeli kufika umcabango wendoda esizakhele igama elikhulu kwezohwebo kuleli nesematheni kulezinsuku emuva kokuwina umklomelo westandard Bank KZN Top Entrepreneur Awards egoli ngeledlule washaya izingqwayingqayi zosomabhizinisi kulo lonke leli.
Abahlala ethekwini bavamise ukubona izimoto ezimnyama ezibhalwe ezicabheni amagama athi: CFG omele Calvin and Family Group. Kungishiye nombuzo wokuthi ingubani le nsizwa esencane eqhamuke esikhaleni yaqhwakela kwelenyoni ekubeni iphithizela kulo leli elikabhanana ethekwini.
Ngiyishayele ucingo ngicela ukuba silumane indlebe ayinginikanga nkinga sadibana endaweni yayo yokudlela ephambili emhlanga Rocks enyakatho yetheku .
Bengingakaze ngiyibone siqu sayo kepha kuthe uma iqhamuka ngabona ngezigansonso zezinsizwa ezine ziyiphahlile kwacaca ukuthi “the boss is here” kwazisholo abafana betheku.
Uqale ngokuxolisa ngokungilindisa isikhathi eside, watshela izisebenzi ze- restaurant yakhe edumile ukuthi azilethe okudliwayo.
Inesithunzi le nsizwa, igabe ngeziphandla ezihlakaleni,ithi ikhuluma ibe iphendula izingcingo ngapha nangapha iphinde iqhafaze imiqhafazo kepha igcine inginika isikhathi sami.
Amagama ayo aphelele ngu-calvin Mandlakapheli Mojalefa Mathibeli, kayimazi uyise ithi izwa kuthiwa wanyamalala ngezikhathi zobandlululo unina ekhulelwe enezinyanga eziyi-8, kuthiwa wawela umngcele eyolwela leli zwe ekudingisweni. Unina ngunkz Getrude Mathibeli waseQwaqwa usaphila uzalwe khona zizine enyangeni kanhlaba (May) ngonyaka we-1988.
Uphothule ibanga likamatikuletsheni ( Matric) ngonyaka wezi2003.
"Hheyi, kulula ukuba abantu basho noma yini uma usuphumelele kepha ngithanda kucace ukuthi ngithe ngineminyaka eyi-12 ngaqala ukudayisa izithelo esikoleni nasemphakathini, ngihlanza amagceke emizi yabantu ukuze ngikwazi ukuzikhokhela esikoleni.
"Lowo Matric nje ngangizifundisa. Umama ubenganginiki imali engibandlulula ethanda kakhulu udadewethu engimelemayo ngoba sibabili kuye, bengithi uma ngicela into anganginiki kepha uma udadewethu upontsho ecela noma yini amnike. Ngaphoqeleka ukuba ngizizamele,” kubeka uca-lvin.
Usuke eqwaqwa weza ethekwini ezokwenza izifundo zebhizinisi edurban University of Techonology esibizwa nge-dut ngonyaka we-2005 uze wayeka ngonyaka we-2007 engaqedanga esalelwe yimilenze emibili ukuba athole idiploma yakhe.
Ubehlala encikile emafulethini asepoint Road ethekwini, ehlala nazo zonke izonakali zetheku kepha ingekho into angayenza ngoba ubehlupheka futhi encengile. Uke waze waboshwa ngolunye usuku kugasele amaphoyisa efulethini efuna izidakamizwa kepha yena wadedelwa.
“Bengihamba ngezinyawo ngisuka efulethini ephoyinti uma ngiya esikoleni. Ngithe ngisahamba lapho ngabona amapakistani edayisa izinto zamaselula ne- airtime ngixhumane nawo ngathenga izinto zamaselula ngazidayisa ebusuku uma izitolo zamaselula ezingasesitolokazi ithe Wheel sesivaliwe esiyaziwa ngechina City.
“Bekuvamise ukuthenga iziva- kashi bekuthi uma ngithenge i- starter pack ngor20 mina ngisidayise ngo-r100 kwabokuhamba ngidayise nama- laptop nokunye. Ngenze njalo lasukuma lelibhizinisi lami kangangoba ngigcine sengisizwa ngomunye umuntu onginike indawo yokusebenzela sesikhanda amacellphone nama- laptop,” kusho ucalvin.
Uqhuba athi ngesikhathi ehlala ephoyinti ubebuhlaba utshwala kepha langa limbe ekuseni ngezintatha sebudamukile wazibuza umbuzo wokuthi ngabe yiyo yini lena into owayeyizele ethekwini esuka kubo eqwaqwa.
"Ngabuyeka ngalolo suku baze bangihleka abangani bami bethi ngiyadlala ngisazobuyela kepha kuze kube manje kangibuthinti ngaphandle uma ngizijabulisa ngamawayini alula hhayi ukuba ngidakwe ngibe yinhlabathi,” kusho yena.
Ube esethutha ephoyinti wazifunela ifulethi elithi yena wayohlala ejohn Ross okuyindawo engcono kunalena abehlala kuyo. Yilapho ke ehlangene nomunye umuntu owabe emlungisele icellphone ngaphambilini baqala ibhizinisi lokudayisa imihlaba.
"Saqala ngokuthenga umhlaba ngemali engu-r5 000 thina sawudayisa ngo-r25 000 saqhubeka kanjalo sagcina sesithenga izindawo ezibizayo nami ngagcina sengizimele namanje ngisalenza leli bhizinisi kangimile.
"Ngibe sengenabela nakuwowonke amanye amabhizinisi njengoba nginamaloli anqamula amazwe, izindawo zokudlela namanye,” ezisholo ngokwakhe. Unezimoto zohlobo oluphezulu ezimnyama zodwa okwenza abantu babuze imibuzo ngazo uwuphendule kalula wathi:
”Black is Royal (umbala omnyama uhloniphekile), uhamba phambili, futhi ngingumfana omnyama. Bangasho abakuthandayo abantu kepha iqiniso yilelo.”
Ngimbuzile ngemibiko ethi zike zamhambela kabi izinto emabhizinisini ngonyaka we-2012 wathi:
“Yiqiniso lelo, ngenza iphutha ngalahla ubizo lwami lokuba yinyanga nokugcina amasiko ngasindiswa zangibhedela izinto. Kepha ngibe sengithwasa ngonyaka wezi-2013 ngithwasiswa ngoyisihlobo sami udlamini wasenanda enyakatho yetheku, ngaphothula zabuya zaqonda izinto zami.
“Nginesigodlo mina ngiyelapha umuthi ngiyazithakela kangikufihli lokho. Esami isigodlo siphakathi endaweni okwakuthiwa ngezabaMhlophe, ngisebenza ngedlozi.”
Ushadelwe, umkakhe ngusimangele Mambatha Mathibeli osebenza okhozini FM, oke waba ngumlingisi emdlalweni kamabonakude izone 14. Banezingane ezimbili ezinye ezintathu wazithola komunye engakashadelwa ucalvin.
IZITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE/ UMSUKA WEDDINGS EZINYE ZITHUNYELWE
KWAKUMNANDI ziwushaya kucalvin nowakwakhe usimangele.
UCALVIN Mathibeli wodumo ethekwini ezicuphile .
UCALVIN ethula inkulumo kweminye yemicimbi emikhulu.
UWUKHOKHOVU lwenyanga engafihli ucalvin, uthi usebenza ngedlozi ubahlabela njalo abangasekho.
UFIKE kanzima empumelelweni ucalvin.